Ihe kacha mma WordPress ndabere ngwa mgbakwunye
Sọnde, Septemba 18, 2011 Wednesday, November 9, 2011 Douglas Karr
IHE: Ebe ọ bụ na-eji MyRepono, M gbanwere VaultPress. Ọ dị ntakịrị oke ọnụ mana ọ bụ nwa afọ WordPress (nke Automattic dere) ọ nweghị ihe ngwugwu ngwungwu niile MyRepono mere.
Enweghị m ngwa mgbakwunye mgbakwunye WordPress maka obere oge. Ya mere… oge mbụ na m furu efu nchekwa data WordPress m bụụrụ nro! Ọ bụ m kpatara onwe m… M na-eme ụfọdụ mmelite na nchekwa data na ama esịn dum nchekwa data na mberede. Anọ m na-eche etu m ga - esi nwetaghachi ihe ntanetị m ebe ọ bụ na enweghị m nkwado ndabere. Anọ m na-arịa ọrịa afọ m ụbọchị niile.
N'oge ahụ, m na a dị iche iche ọbịa onye, ​​ekele, nwere otu weghachi ihe mberede atụmatụ maka saịtị ahụ. Ọ bụ ihe dị oké ọnụ weghachi, na-efu m ọtụtụ narị dollar, mana m na-enwe ekele ruo mgbe ebighi ebi na enwere m ike ịnweta ihe niile ma weghachite post post ikpeazụ n'ime awa 24. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, anyị ebipụtala ihe karịrị blog posts 2,775. Nke ahụ bụ ọtụtụ data (470Mb). Ọ bụ data dị ukwuu iji wụnye nkwado ndabere cheapo ma tụọ anya ka ọ rụọ ọrụ kwa ụbọchị na enweghị nsogbu. Yabụ, achọchara m ma chọọ maka kacha mma WordPress ndabere ngwa mgbakwunye - wee chọta ya.
Amaara m mmadụ ole na ole wụnye nkwado ndabere ozugbo na sava weebụ ha… nke a anaghị enyere gị aka mgbe onye nnabata gị tufuru saịtị gị! Iji aka na-akwado WordPress bụkwa ihe mgbu ebe ọ bụ na ị nwere nkwado ndabere ma faịlụ na nchekwa data. Ndị ọzọ na ndị enyi m kwadoo faịlụ ma na-eleghara anya ndabere nchekwa data… nke ahụ bụ ebe gị niile ọdịnaya bụ! Need chọrọ a WordPress ndabere ngwa mgbakwunye nke na-etinye atụmatụ ndị a niile - na ndị ọzọ.
Anyị arụnyela ma nwalee myRepono, Ọrụ nkwado ndabere igwe ojii. myRepono bụ ọrụ dị mfe, na-akwụ gị ụgwọ site na bandwidth ị na-eji kama ikikere ngwanrọ ma ọ bụ ụfọdụ nnukwu ego kwa ọnwa. Ọ bụ pennies otu ọnwa maka obere saịtị ma ọ dị n'okpuru 10 cents kwa ndabere maka saịtị m.
MyRepono atụmatụ gụnyere:
Weghachi WordPress na-akparaghị ókè nrụnye
Ndabere nke faịlụ WordPress niile
Ndabere nke nchekwa data MySQL
Urenọ ná Ntụkwasị Obi File izo ya ezo
Ngwaọrụ Mweghachi Faịlụ
Ndabere File mkpakọ
Njikwa Weebụ - enwere ike ịnweta ya site na ihe nchọgharị ọ bụla, ebe ọ bụla
Ndị na-agụ blog Tech Tech nwere ike banye maka myRepono taa site na njikọ nke mmekọ anyị, ị ga - enweta otuto maka $ 5 mbụ nke nkwado ndabere. Nke ahụ bụ nnukwu ihe! Ihe mgbakwunye ahụ were ihe na-erughị otu nkeji iji wụnye ma hazie ya.
Otu ndetu - nke a bụ ezigbo usoro dị mma maka ịkwaga na saịtị WordPress ma ọ bụ blọọgụ gị!
Sep 19, 2011 na 7: 06 AM
Ọfọn nke ọma! Echere m na anyị nile ga-amụta ụzọ siri ike, ọ bụghị ya? Na-ada ka nnukwu echiche.
Sep 20, 2011 na 8: 07 AM
N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere Compendium blog, ọ gaara adịworị mma…
Sep 20, 2011 na 8: 50 AM
N'eziokwu, nlekota oru, nchekwa data na ntinye aka na saịtị bụ atụmatụ dị ukwuu nke ọrụ niile ị na-ezughị oke!
Nov 29, 2016 na 1:14 AM
M na-eji BackupGuard ndabere WordPress saịtị m. Ọ bụ nnukwu ngwa mgbakwunye! https://wordpress.org/plugins/backup/